Lisitra fanamarinana mailaka: Dingana 13 alohan'ny tsindrio alefanao! | Martech Zone
Zoma, Oktobra 7, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Mamoaka mailaka heck isan-kerinandro izahay ary ny mpamaky anay dia nihanaka tamin'ny mpanjifa 4,700 XNUMX mahery! Te hizara ny toro-hevitray sy ny lisitra fandalovanay isan-kerinandro izahay alohan'ny tsindrio ilay bokotra fandefasana.
Ny atiny ve mendrika, manan-danja, antenaina ary sarobidy ho an'ny mpisoratra anarana? Raha tsy izany dia aza alefa!
Raha vao mandefa ny mailaka ianao, dia mazàna singa roa ihany no ahitan'ilay olona mandray… ny voalohany dia hoe avy aiza ilay mailaka. Ny anao avy amin'ny anarany mifanaraka amin'ny fandefasana tsirairay? Azo fantarina ve ny adiresy mailakao?
Ny singa faharoa dia anao andalana foto-kevitra. Kick ass ve? Andalana foto-kevitra ve izay misarika ny sain'izy ireo ary mahatonga azy ireo hanokatra ny mailaka hamaky ny atiny lehibe ao anatiny? Raha tsy izany dia hamafana tsotra izao ny olona amin'izao fotoana izao.
Raha manana sary ianao dia mampiasa ve alt tags hanoratra lahatsoratra hafa izay hanosika ny mpamaky hisintona ireo sary na afaka handray andraikitra raha tsy misy sary?
Mora vakiana ve ny layout anao a Fitaovana finday? Mahatratra 40% amin'ireo mailaka rehetra no vakina amin'izao amin'ny finday ary mitombo hatrany ny isan-taona. Raha manana mailaka midadasika miaraka amina lahatsoratra lava be dia be ianao, dia ho sosotra ny mpamaky mandroso sy miverina. Mora kokoa ny mikapoka mamafa.
Raha mandefa mailaka amina endrika HTML ianao, misy rohy mahafinaritra ve ao amin'ny lohateny ahafahan'ny olona manindry ary jereo ny mailaka amin'ny browser?
Nojerenao ve ilay mailaka tsipelina, fitsipi-pitenenana ary ny fisorohana ireo teny izay mety hahatonga anao ho voasivana ao anaty folder mailaka Junk?
Inona no tianao hataon'ny mpamaky aorian'ny famakiany ny mailaka? Nanome zavatra tsara ve ianao miantso-to-hetsika mba hanaovan'izy ireo izany hetsika izany?
Misy fampahalalana fanampiny azonao angatahina amin'ny mpamaky ve izay hanampy anao lasibatra sy fizarana ny atiny alefanao? Maninona raha mangataka fampahalalana iray isaky ny mailaka?
Ianao ve andramo ny mailaka amin'ny lisitra misy sy tsy misy angona hahitanao hoe ahoana ny fisehon'ny tadin'ny personalization sy ny atiny mavitrika? Nandeha ve ny rohy rehetra?
Avy hatrany ve ianao tongava amin'ny teboka sa miala sasatra amin'ny andalana ny marketing mahasosotra? Sahirana ny olona - atsaharo ny fandaniam-potoana!
Manome fitaovana ho an'ny olona ve ianao misafidy amin'ny serasera mailakao? Raha tsy izany dia tena mila mandeha alàlana miorina amin'ny alalana ianao mpamatsy mailaka.
Manome fomba ho an'ny olona ve ianao fizarana ny atiny na amin'ny alàlan'ny fandefasana bokotra namana na bokotra fizarana sosialy? Ary raha mizara izy ireo - manana safidy fisoratana anarana ve ny pejinao?
Manoratra sy misoratra amin'ny mailaka foana aho. Omeko tombony hatrany amin'ny orinasa ny fisalasalana rehefa misoratra anarana aho fa raha vao hitako fa mamafa ny mailaka bebe kokoa avy amin'izy ireo aho satria tsy misy dikany izany… Tsy manoratra aho ary matetika tsy hanao raharaham-barotra amin'ny orinasa intsony. orinasa. Raha hanosika hafatra amin'ny olona iray ianao - manaja olona ary manaja ny fotoanany ary mamoaka mailaka mahafinaritra!